Mophie dia mandefa tranga vaovao momba ny bateria sy ny fitehirizana ho an'ny iPad Mini sy iPhone 6/6 Plus | Vaovao IPhone
Talohan'ny fahatongavan'ireo modely iPhone vaovao misy fahaiza-bateria avo kokoa, maro amin'ireo mpampiasa mavesatra (izay anisany ahy) no tsy maintsy nanao mampiasa batterie ivelany ho an'ny recharging ny fitaovantsika mandritra ny andro na mampiasa ny fonony Mophie, izay ankoatry ny fiarovana ny fitaovantsika dia mampiditra bateria ahafahantsika manitatra ny androm-piainan'ny fitaovantsika nefa tsy mila mampifandray azy amin'ny tambajotra elektrika.
Noraisiny fa tonga ihany nony farany. Vao natolotr'i Mophie a boaty bateria ho an'ny iPad Mini miaraka amin'ny fahafaha-miaina 8000mAh, izay ahafahantsika mameno tanteraka ny iPad Mini anay ary miaraka amin'ny fahafaha-mitahiry 32, 64 ary 128 GB. Raha iray amin'ireo mpampiasa efa manana tranga mifanaraka amin'ny zavatra ilainay izahay, saingy mila batterie ivelany misy fitehirizana izahay dia afaka mampiasa Space Pack, bateria ivelany azo haverina izay manolotra tahiry 128 GB ihany koa ahafahantsika mitahiry hira 36.000, sary 64.000, horonan-tsary 56 ora ary koa afaka mitahiry karazana rakitra.
Ny tranga Space Pack, miaraka amin'ny bateria sy fitehirizana fanampiny, azo alaina ihany koa ho an'ny iPhone 5 / 5s, iPhone 6 ary iPhone 6 Plus miaraka amin'ny safidy fitehirizana 32, 64 ary 128 GB, raha ny maodely azo alaina ho an'ny iPhone 5 / 5s (tsy mifanaraka amin'ny iPhone 5c satria tsy mitovy amin'ireo fitaovana ireo) dia manome antsika ny mety hanitarana ny habaka amin'ny 16, 32 ary 64 GB. Ireo tranga bateria sy fitehirizana vaovao ireo dia misy amin'ny fanaintainana mainty, fotsy, manga, mena ary volamena.
Misaotra amin'ny fampiharana Mophie Space azontsika atao ny mitantana sy miditra amin'ny vaovao rehetra mitahiry an'ity tranga ity amin'ny bateria sy toerana fitahirizam-bokatra avy amin'ny iPhone, iPad, Mac na PC izahay, nefa tsy mila mampifandray telegrama, lafiny iray izay manamora tokoa ny fampiasana sy ny fifanarahana amin'ireo rafitra hafa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Mophie dia mandefa tranga bateria sy fitehirizana vaovao ho an'ny iPad Mini sy iPhone 6/6 Plus
Te-hamokatra bebe kokoa ve ianao? Mandinika ny fampiharana Pomodoro Time amin'ny horonan-tsary izahay
Ahoana ny fanovana ny endrika Apple Watch